Suuqa ugu wayn dalka Soomaliya ee Bakaaraha oo Caawa Gubanaya iyo Wararkii ugu danbeeyay ( SAWIRRO) | KALSHAALE
Suuqa ugu wayn dalka Soomaliya ee Bakaaraha oo Caawa Gubanaya iyo Wararkii ugu danbeeyay ( SAWIRRO)
Jan 10, 2019 - 14 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Waxaa sii xoogeysanaya dab caawa fiidnimadii ka kacay qeybo ka mid ah suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho.
dabka oo markii hore ka bilowday qeybta Huudheyda iyo maacuunta ayaa hadda ku sii fidaya qeybo kale oo suuqa ka mid ah, waxaana ka mid ah meelaha uu gaaray qeybta bacadlaha.
Hanti aad u fara badan oo tiilay suuqa bakaaraha ayuu khasaare xoog leh u geystay dabkan, waxaana socda dedaalo badan oo lagu deminayo.
Boqolaal qof oo isugu jira ganacsato iyo dad kale ayaa ku qulqulaya Suuqa, iyadoo ciidamada dowlada ay ku jahwareersan yihiin sidii ay u kala saari lahaayeen dadka hantida ay ka taalo suuqa iyo burcada dooneysa iney wax boobaan.
Gaadiidka dab demiska ee ay leedahay shirkada Hormuud iyo kuwa maamulka gobolka banaadir ayaa la tacaalaya deminta dabkaasi xooga badan, waxaana aad u cakiran xaalada suuqa Bakaaraha.
Akhyaarta ra'yigiina halkan ku qora (14)
Daanyeero cawaan ah. Meeqa sanno ayeey lacag kadaba ordayeen. Meeqa sanno eey lacag xalaal iyo xaaraanba sameeynayeen, iyaga oo aanan “maalgashan” amniga caruurtooda iyo naagahooda eey ka dhalayaan 10ka caruur iyo kabadan. Meeqa sanno ayaa laga waayay, nidaam la’aan nolol majirri karto. Nabad la’aan xataa dacwadda diinta lama faafin karro, waajibna kuguma ahan. Hadii aadan nabad heeysan, oo aadanna ka fakireeynin sidii aad nabad ku heli laheeyd, nafta dadkaaga iyo nafta bani’aadamkana aad u nabad galin laheeyd, oo hadii loo baahdana eey tahay in aad ka dagaalanto fowdadda, iyo daanyeernimada, hadde sidaas ayaad u noolaan.
Hagubto, amaba haqarxo, waxa ka gacancsadda Bakaaraha iyo suuq Bacaad, iyo Xamar oo dhan waa dad daanyeero ah oo aanan caqli laheeyn. Daanyeer.
Kuwaan kale ee dowladda isku sheega, lacagta eey ka qaadaan daanyeertaan, amnigoodana Kuma sugaan, dabkaan oo kale iyo ka hortagiisana taladda uguma jirto. Taas oo iyagana ka dhigeeysa daanyeer kale.
Daanyeer heshay daanyeer kale oo kasii caqli xun. Doqommo.com
Shidaalka iyo habraha shaaha ka riyo waa in gooni loo saaro, haddii kale laga gudbimahayo dabkaan baas.
Arinkan waa tragedy, waxaa xoolo ku beelay Somali badan oo Caymis ( Insurance) ku jirin..
Qaar badan waxba uga dambayn, danyar ahaa….
Walaahi waa la murugoonayaa ummadaas masiibada u timid.
Sida Cadaado sheegay waa dhici kartaa in deeryeer tuug ah ku xoolo beeleen oo diidan in dowlad dhalato, amniga u suga oo canshuur yar bixiyaan
Bossaso iyo Hargeysa hadday canshuur amnigooda lagu sugo bixiyaan maxaa Bakaare u diiday oo ka suuq weyn?
Allow meel kale kasii.🕌🕌🕌🕌
Siduu dad badan kuu sheegay, ma aqli badnid.
Maxaa isu keenay dab iyo Canshuur.
Sacii Eedo Xaawo galey iga dheh.
ALOOW BAKHTII MASAAKIIN AAN CIDNA CAYMINAYN BAA HANTIDOODII TAHAYE.
KU DARSO DIGNIINTAYDII:-
ISIS MADE IN ISRAELI(SUICIDE PROJECT & ISRAELIAN MISSIONERY GROUPS)=ELLIOTE SHIMON HE IS JEWISH LEADER MISSIONERY GROUP.GO FUCK YOUR SELF.ISNOT MUSLIMS.sure.
Fulaynimada iska daa! Aad LOP ka baqdo oo iska celi keliya kaaga dhaqtay!!!
Aqri waxa Cadaado sxbkay qoray, taas ayaan ka jawaabay..
Waa run, haddii dowlad adag jirto, inta habeenkii rondo sameeyaan ayey suuga ilaalin, laakiin waxaa ka horaysa in dowlad la adeecin oo la caawiyo canshuur u baahan.
Xitaa Cayymis loo samayn karaa haddii dowladnimo soo noqoto.
Dabshid waxaad u hadal egtahay ciyaal Xeebta Carnebiffka gadaashiis, ciida cunsiin jiray oo marka Xeebta nimaano kala carari jiray, ciyaal Wardhiigley u badnaa..kkkkkkkk
waa maxay weerarka gaadmada ah anoo Cadaado u jawaabay?
Caawa Hotel jiifa,safar.com
Ragga fulayada ah waxaad ku garan:
1. Sida dhoocilo ayey caytamin marka hadalkale ku ciil baxaan waayaan.
2. Ama marka kasii jeedo ku weerarin oo waxkale mashquul ku tahay, sida dhibka Bakaaraha oo cay iyo isdifaac waqti u hayn, weliba safar ah.
Waa wax meel kuugu qoran, marka soo noqdo.
Xarig shabaqa malaayga ayaa la dhici jirnay kuwa Zono Wardhiigley ilaa Afasyoni ka yimaada oo ku oran jiray, yaan la idinku arkin zono Hoobaal….
Ayagana marka cidla kaa helaan kugu gooban…
Waa wada Dabshid miiran fulayo…..
Sobhanallah Allah Akbar!
Alayahoow kaqabooji dabku waa cadaab & naaree..Ameen!😥😥
I hate the fucking FIRE bro, my father was a firefighter in Djibouti 1980s kii
Toronto iyo qurbahana more experience baan kasii helay maadamaa ay 24\_7 dagaal kula jiraan dabka…guryo BUSHAASH ka samaysan & KARTTOON baan ku jirnaa, qolka kugu xiga hadii dab qabsado, adigana waa ku haysta with in a two seconds!
Kolayba tuulada GADHOOWE baa sidaas u casaan doonta sawirka ka muuqda markaan YOOCADA ku habaansano ilayn sac ama Cow cusub baa yimide.
8 gaadhi oo hubka BM saaran yahay uun baa GADHOWE lagu jeedinayaa oo GARBO SIMAN.
But won’t be a revenge, just reclaim our own territory!
Dhamaan wan idin salmay.Umada masikinta ah illahow hantidooda ubadbadi dab waa musiibo lakin waxan umalaynaya bakaraha in mar walba kas loogubo waa in laga dayaa o dhimaha cooshadaha ah ana alwacda kasameysan kuli waa in dhagax laga dhigaa shidalkana gaar loo saaraaa.
Bossaso markuu suuqii gubtay kuli dhagax ayaloo bedalay wana laga nafisay dawlafu waa ibey handida ay canshurta kaqadato ilalisa dab damisna keen hal ama labo waxba maqabtane .
Dabshid wanku salamy. Waxan aad igu qoslay Md cusub Pm aadku riday o ahaa mustagow Dalxaha Qardho haygu dirin kkkkkkkkkkkk Somaliland ninkas waka sastay jawaabtui sadexaad ayeyka bixiyen nimnaku maxey atkwwn waa yaabe ninka waliba shaqo mabilabine kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Saln iga qabo sxb .Wsr ninyajow wali caydii maad dhaafin kkkkkkkkkkkkk Adigu nin qabiil mahid o wan ogahay nin dalkisa jecel ayad tahay iyo somali lakin ninyahow waxa belo ku dhigtay shekh iyo sharifba nacalad inta yar hadadka reebi laheyd kalshale waxadka noqon lahey Super1 lakin fikiradada waa dhaxal gal wayo marba mesha waxka khaldan yihin kama gabatid cayda un isan iloow kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
===BAAQ DABA YAAL DOORASHADI PUNTLAND & ARAR.
ARAR; qaybti hore ee 1967di ayyaa raìsulwasaarihi hilligaa AUNTE M.I.Cigaal wuxuu amray taliyihi ciidamaha militeriga AUNTE M.S.Barre in ciidan loo diro xuduudka Somalia iyo kenya si loo badbaadiyo reer miyiga Somali oo ay ciidamaha Kenya dhibaato nooc kasta ku hayyeen. *Ciidanka cirku wuxuu na diray aniga iyo AUNTE C/Qaadir Xaaji? Xasan DEKOW dhowr beri ka dibna Deekow waxaa lagu soo bedelay M/muud Xaaji Cilmi “xaaji dhagax”. *Waxaana nala siiyay dayaarad North American T-6 Texan waxaana amar naku siiyay inaan subaxkasta ku duulno Kismaayo/Raskiamboni ilaa Diif Xabbadna aanan ku ridin ciidamada Kenya inay ayyagu nagu billaabaan mooye. *Waxaan subaxkasta duulnaba MARKI dambe ciidamadi Kenya waxay gadaal u gurteen 120 km qiyaasti. *Dadkii degana Golbiyo ayyaa aniga Xaaji Dhagax noo keenay dhowr DIBI oo abaal marina Cadawgaan ka dul qaadnay awgi WAAN kudiidnay waana canaananay markaan u sheegnay inaan difaacooda mushaar ku qaadano. *Kismaayana waxaa ka baxay ciidanka Lugta uu watay sarkaal Gadabuursiya oo igu yiri Burma ayyaan ka dagaalamay. *Intaasi waa arar & xusuus.
***Haddaba doorashadi Puntland waxay ahayd xaaraan marka laga reebo urursanaanta iyo IS difaacidda M. Saleebaan. *Waa koowe waxaa soo baxday inaysan hooyooyinku marnaba deegaankaa wax xaqa ku lahayn Tasso xaqdarra. *Waa tan labaade xildhibaannada Puntland Dhowr shaqsi uu Cali Ciise Cabdi ugu caansanyahay MOOYE inta kale waxay ahaayeen Tuugo aan iimaan iyo sharaf midna lahayn oo qadaadiic qaatayaal ah. *Siday Somali oo dhan ogaatay Baarlamaanka Puntland wuxuu noqday gole tuugo camirtay.
***Haddaba sidee wax loo sixikara? WAXAY ila tahay inay salaadiinta FIYOW oon rajayna inuu ku jiro Islaan Ciise Islaan M/med waa inay kala diraan Baarlamaan Beeleedka DENI mooye saa ayyagaa beelaha madax u ahe. *DENI waxaan uga reebay inuusan KALTANKU qulub qannad keenin Balse waa inuu isaguna uu sheego intuu laaluush bixiyay & cidduu siiyay. *Intaa kadib waa inay Samadoonnada & Nabadoonnadu soo xulaan xubnaha baarlamaanka jadiidka. *Ogi inay fulinta arrintaan sahal ahayn BALSE waxaan u arkaa badbaadada Puntland. *Sidaan dhowr goor ku celceliyay waxaan ahay ruux talijiray RUN. WBT
Gabadha kaliya ee ku Jirtay Baarlamanka Puntland oo Xil loo doortay
Garoowe ( Kalshaale ) Gabadha kaliya oo ka mid ah baarlamaanka Maamul Goboleedka Puntland Naciimo ...
Nin Ajnebi ah oo lagu Qabtay Garoonka Muqdisho iyo Dalka uu kasoo jeedo
Muqdisho ( Kalshaale ) Nin ajnabi ah oo laga shakiyey ayaa sabtidii lagu qabtay ...
© 2019 KALSHAALE - All rights reserved.